Kwenziwanjani uma kudingeka ngikhansele ngenxa yezimo eziphuthumayo noma isimo esingenakugwemeka? - Isikhungo Sosizo se-Airbnb
Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali ongakhetha kuzo, khetha ukubhukha ekhasini elithi Uhambo. Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile usebenza kuphela ekubhukheni okuthile. Sikhipha ezamuva ngomhla ka-1 noka-15 wenyanga ngayinye.
Izinqubomgomo ezisebenza kuwo wonke amalungu
Kwenziwanjani uma kudingeka ngikhansele ngenxa yezimo eziphuthumayo noma isimo esingenakugwemeka?
Sicela uqaphele: Lesi sihloko asikhulumi ngezimo ezihlobene nobhubhane lwe-coronavirus (COVID-19). Hlola isihloko sethu se-COVID-19 somthetho wezimo ezingalindelekile ukuze ufunde ngokuhlanganiswa kwezimo ezihlobene ne-COVID-19, futhi ikakhulukazi ukuhlanganiswa kwemikhawulo yokubhukha okwenziwe ngemva kuka-March 14, 2020.
Singahle sikwazi ukukubuyisela imali noma sihoxise izijeziso zokukhansela uma kudingeka ukhansele ngenxa yesimo esingalindelekile esingaphezu kwamandla akho. Ngezansi kunohlu lwezimo ezifakiwe Emthethweni wethu Wezimo Ezingalindelekile. Ngaphambi kokukhansela, hlola ukuthi isimo sakho sifakiwe ohlwini olungezansi nokuthi unganikeza ngamaphephambhalo adingekayo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi ukukhansela okungenazijeziso kutholakala kuphela ezimweni ezingalindelekile ezenzeka ngaphambi kosuku lokungena olusemthethweni ngokubhukha kwakho. Ngaphezu kwalokho, Umthetho wethu Wezimo Ezingalindelekile awusebenzi ekubhukheni kwe-Luxe noma kwe-Luxury Retreats, okungaphansiKwenqubo Yokubuyisela Isivakashi eyehlukile ye-Luxe. .
Izimo ezidinga amaphephambhalo
Ukufa kombungazi, kwesivakashi, noma umsizi wakhe, isivakashi esengeziwe, ilungu lomndeni eliseduze noma umnakekeli. Uzocelwa ukuba unikezele ngenye yalama dokhumenti:
Isihloko sezindaba esibalula umufi
Ukuhlatshwa ngukugula okubucayi noma ukulimala okuthinta umbungazi noma ilungu leqembu labantu abahambayo. Uzocelwa ukuba unikezele ngesitatimende esivela kudokotela esiqinisekisa ukuthi umuntu akakwazi ukubungaza noma ukuhamba ngenxa yokuhlatshwa ngukugula okungalindelekile, isifo esibucayi noma ukulimala. Isitatimende kufanele futhi sibe nosuku olwangemva kokwenziwa kokubhukha sinikezwe zingakapheli izinsuku ezingu-14 kusuka ekukhanseleni. Okwamanje, izimo esezivele zikhona ezaziwa umsebenzisi ngesikhathi sokubhukha azihlanganisiwe Emthethweni wethu Wezimo Ezingalindelekile.
Izibopho ezigunyazwe nguhulumeni kuhlanganise ukusebenza njengelungu lebandla labasizi bejaji, imikhawulo yokuhamba, ukuvela enkantolo nokwabelwa inkonzo kwabezempi. Uzocelwa ukuba unikezele ngekhophi yesaziso esingokomthetho esinosuku lwangemva kokwenziwa kokubhukha, kuhlanganise negama lomuntu ofeza isibopho.
Umonakalo ongalindelekile wendlu, ukulungisa kanye nezinkinga zamasevisi endlini ye-Airbnb ezenza kungabi okuphephile ukubungaza izivakashi, noma okuvimbela izivakashi ekutholeni amasevisi ayisisekelo njengamanzi empompi. Lokhu akuhlanganisi ukulungiswa okuhleliwe. Uzocelwa ukuba unikezele ngawo wonke amadokhumenti alandelayo:
Ubufakazi bokuthi inkinga iyalungiswa
Isilinganiso sokuthi izolungiswa nini
I-invoyisi yokulungiswa okwenziwayo
Ukuphazamiseka kwezokuthutha okwenza kungayeki endaweni yakho evakashelwayo, kuhlanganise nokuvalwa kwemigwaqo nokukhanselwa kwezindiza lapho kungekho khona ezinye izindlela zokuhamba. Lokhu kuhlanganisa ukuvalwa nokukhansela okubangelwe yizinhlekelele zemvelo, njengokuzamazama komhlaba noma iziphepho ezinkulu. Uzocelwa ukuba unikezele ngenothisi yokuvalwa komgwaqo, noma amaphephambhalo avela enkampanini yezindiza ephawula ukuthi indiza ikhanseliwe kanye namaphephambhalo aqinisekisa ukuthi akunakwenzeka ukuthi uye endaweni yakho oyivakashelayo.
Ukukhanselwa kwezitimela, amabhasi noma kokokuhamba emanzini lapho kungekho okunye ukuhamba okutholakalayo ngosuku olufanayo. Uzocelwa ukuba unikezele ngamaphephambhalo akhombisa ngokusobala ukuthi isithuthi besingasebenzi ngalolo suku, njengesithombe seskrini sewebhusayithi yenkampani noma ilinki yesitatimende esisemthethweni esivela esithuthini.
Izimo ezidinga ukuhlolwa okukhethekile
Awekho amaphephambhalo adingekayo kulezi zimo, kodwa iqembu lethu elikhethekile lizohlola isicelo sosizo ngasinye ukuqinisekisa ukuthi uthinteka ngokuqondile.
Ukubhukhwa kweZindlu Zezinhlekelele okukhanseliwe. Imininingwane eyengeziwe mayelana neZindlu Zezinhlekelele.
Izinhlekelele zemvelo, imisebenzi yamaphekula kanye nemibhikisho yezombusazwe/yezepolitiki evimbela isivakashi ekuyeni noma ekubuyeni endaweni evakashelwayo, noma eyenza kungaphephi ukubungaza izivakashi.
Ubhubhane lwesifo noma ukugula okuthinta isifunda ngokuzumayo noma iqembu lonke labantu. Lokhu akuhlanganisi izifo ezikhona ezihlotshaniswa nendawo—ngokwesibonelo, umalaleveva e-Thailand noma imfiva ebangwa omiyane e-Hawaii. Noma yikuphi ukulungisa kuyinqubomgomo yethu maqondana nokuqubuka kwesifo, kanye nobubanzi bokusetshenziswa kwenqubomgomo, kuzonqunywa ngokususelwa ezimemezelweni ze-World Health Organization kanye neziphathimandla zasekhaya.
Imingcele yokuhamba ebekwe nguhulumeni, i-ejensi yokusebenza komthetho, noma uphiko lwabezempi elibeka imingcele yokuya noma ukusuka endlini noma endaweni yokokuzithokozisa.
Izeluleko zokusongelwa kokuphepha nokuvikeleka ezikhishelwe indlu noma indawo yokokuzithokozisa noma indawo yokuhamba yomcimbi wesivakashi.
Ukunqamuka kwesevisi eyinhloko okuthinta indlu noma indawo yokokuzithokozisa.
Izimfuneko zokushintshwa kwama-visa noma amaphasiphothi ezenza kungayeki endaweni evakashelwayo. Lokhu akubandakanyi amadokhumenti okuhamba alahlekile noma aphelelwe yisikhathi.
Okufanele ukwenze ngokulandelayo
Uma uqinisekisile ukuthi isimo sakho sihlangabezana nezimfuneko ezingenhla, qala ukhansele ukubhukha kwakho kwamakhaya noma Okokuzithokozisa kwe-Airbnb. Uma ukubhukha kwakho kungaphansi kwesimo esingalindelekile esamukelwayo, uzokwaziswa ukuthi ukubhukha kwakho kufanelekela ukukhansela ngaphandle kwesijeziso, futhi uzobuyiselwa imali ephelele uma uyisivakashi.
Ngingakukhansela kanjani ukubhukha kwami indawo yokuhlala?
Ungakwazi ukukhansela ukubhukha noma nini ngaphambi noma phakathi nohambo lwakho.
Ngingakukhansela kanjani ukubhukha njengombungazi wendawo yokuhlala?
Ukubungaza izindawo zokuhlala
Njengombungazi, yiziphi izinhlawulo ezisebenzayo uma ngikhansela ukubhukha kokuhlala?
Because cancellations disrupt guests' plans and impact confidence in the Airbnb community, the following penalties are applied for host canc…
Ngena ngemvume ku-akhawunti ukuze uthole usizo olwenzelwe wena
Thola usizo ngokubhukha kwakho, i-akhawunti nokuningi.